နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ကေ့အရိုး Dedusting(24 များအတွက်စုစုပေါင်း ကေ့အရိုး Dedusting ထုတ်ကုန်များ)
ကေ့အရိုး Dedusting - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ ကေ့အရိုး Dedusting ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား ကေ့အရိုး Dedusting / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် ကေ့အရိုး Dedusting များထဲမှ Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. ။
tag ကို: ကေ့အရိုး Dedusting , ဇင့် Dedusting လေ့လာကြရအောင် , Spliced ​​Dedusting လေ့လာကြရအောင်
ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးအရိုးစု၏ဖြစ်စဉ်ကို process ကို အရိုးစုဂဟေဆော်စက်ကိုဖယ်ရှားမြေမှုန့်များ၏လုပ်ငန်းစဉ်များကဘာတွေလဲ? 1. အဆိုပါလှောင်အိမ်အရိုးစုမြို့ပတ်ရထားဖွဲ့စည်းပုံမှာချမှတ်။ အဆိုပါ longitudinal နှင့်အိတ်လှောင်အိမ်၏ပြင်ဆင်ထားလက်စွပ် reverse...
tag ကို: Organosilicon Dedusting လေ့လာကြရအောင် , multi ပူးတွဲ Dedusting လေ့လာကြရအောင် , Dedusting လေ့လာကြရအောင်ကိုလေပေါ်မှာပ
သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအချက် (1) မြေမှုန့်အရိုးစု၏အရွယ်အစား၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု: မြေမှုန့်အရိုးစုများ၏ဂျီဩမေတြီအရွယ်အစား, မြေမှုန့်အရိုးစု၏အချင်းထဲမှာ, ဓါတ်ငွေ့၏ဝင်ပေါက်နှင့်အိပ်ဇောပိုက်များ၏အသွင်သဏ္ဌာန်နှင့်အရွယ်အစားအရေးကြီးဆုံးအချက်များဖြစ်ကြသည်။ (2)...
tag ကို: Chuck Dedusting လေ့လာကြရအောင် , elliptical Dedusting လေ့လာကြရအောင် , အိတ်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေးလေ့လာကြရအောင်
Trapezoid Dedusting ကေ့အရိုး
မော်ဒယ်နံပါတ်။: Dusting Bag Cage
tag ကို: Trapezoid ဖုန်မှုန့်အိတ် Frame က , ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေးလေ့လာကြရအောင် , အိတ်ကေ့ Dusting
မြေမှုန့်စုဆောင်း၏အရိုးစု၏ဝိသေသလက္ခဏာများ 1. မြေမှုန့်စုဆောင်း၏အရိုးစုတခုမြို့ပတ်ရထားဖွဲ့စည်းပုံမှာချမှတ်။ အဆိုပါ longitudinal နှင့်အိတ်၏လက်စွပ်ပြင်ဆင်ထား reverse အညီအမျှဖြန့်ဝေသည်,...
tag ကို: အိတ်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေးကေ့အရိုး , Chuck အမျိုးအစားအိတ်ကေ့အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး , Organosilicon ဖုန်မှုန့်အိတ် Frame က
အဆိုပါ organosilicon dedusting မူဘောင်မြေမှုန့်အရိုးစု၏ organosilicon အလွှာလိုက်နာဖို့အရည်ပျော်ပစ္စည်းအမျိုးအစား organosilicon အပေါ်ယံပိုင်းကိုအသုံးပြုထားတဲ့ဆီလီကွန်အပေါ်ယံပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအက်ဆစ်,...
multi ပူးတွဲမှုန်ရေမွှားပလပ်စတစ် dedusting အိတ်လှောင်အိမ်
tag ကို: Anticorrosion ဖုန် Bag ကေ့စုဆောင်းခြင်း , Rotary ပူးတွဲမှုန်ရေမွှားပိတ်စအိတ် Frame က , နွေဦး Organosilicon Bag ကေ့
ဖုန်မှုန့်အရိုးစုဖုန်မှုန့်အပေါ်ယံပိုင်း၏ဖုန်မှုန့်အပေါ်ယံပိုင်း အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်း၏ electrostatic မှုတ်လိမ်းနှင့်တကွ, ရေမှုန်ရေမွှားသေနတ်၏ရှေ့ဆုံးထုတ်လုပ်မြင့်ဖိအားမြင့်ဗို့ electrostatic မီးစက်မှဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင့် Corona...
အီလက်ထရောနစ်ထိန်းချုပ်မှု 24V dedusting သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်
tag ကို: ဓာတုစက်မှုများအတွက် 24V Solenoid Valve , ADC12 Solenoid Valve , Air ကိုဖိအားကယ်ဆယ်ရေး Solenoid Valve
အလုပ်အဖွဲ့နိယာမ အဆိုပါမြှေးနှစ်ခုလေထုထရံအခန်းတို့သည်ရှေ့နှင့်နောက်ကျောထဲသို့လျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်အပိုင်းသုံးပိုင်းနှင့်, ချုံ့လေထုဟာအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာအပေါက်မှတဆင့်နောက်ဘက်လေထုအခန်းထဲကချိတ်ဆက်သောအခါ,...
ဓာတ်အားပေးစက်ရုံအတွက် Dedusting အိတ်
tag ကို: ဘိလပ်မြေစက်ရုံများအတွက်အထူး Dedusting Bag , လူမီနီယမ်စက်ရုံများအတွက်အထူးဖုန်မှုန့်အိတ် , Electrolyzer အထူးပိတ်စ Bag
မြင့်မားတဲ့အပူချိန်ဖုန်မှုန့်အိတ်၏ဘယ်ထုတ်လုပ်သူစကားလုံး-of နှုတ်တော်ထွက်အကောငျးသလဲ ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း filter ကိုအိတ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုအသုံးပြုပါလိမ့်မည်, နှင့်အထွေထွေအတွင်း filter...
မြင့်မားသောဆီလီကွန်အောက်စီဂျင် dedusting အိတ်
tag ကို: မြင့်မားသောဆီလီကွန်အောက်ဆီဂျင် Filter ကို Bag , ဖုန် Filter ကိုအိတ်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု , ဖုန် Filter ကိုအိတ်အသုံးပြုခြင်း
အိတ်အမျိုးအစားမြေမှုန့်စုဆောင်း (1) စစ်ထုတ်အထည်ဖုန်မှုန့်စုပြုံသိပ်ချောင်သို့မဟုတ်အရမ်းကြပ်လွန်းမြည်းကြိုးကိုဖြည်ပြီးလွယ်ကူချိတ်ဆွဲမရသင့်ပါတယ်။ 2. နယူးအဟောင်း filter...
polyester ဖိုင်ဘာ antistatic အပ်ဝမ်းနည်း၏ Dedusting
tag ကို: အပ်နှင့်အတူ Filter ကိုအိတ်ခံစားခဲ့ coated , ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Mulching Filter ကို Bag , တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ် coated PTFE Dedusting Bag ခံစားခဲ့
မြင့်မားသောအပူချိန်အကြားခြားနားချက်နှင့်အခန်းအပူချိန်ဖုန်မှုန့်အိတ်ဘယ်မှာလဲ ဖုန်မှုန့်အိတ်များသောအားဖြင့်ဖုန်မှုန့်အိတ်သို့မဟုတ်မြေမှုန့် filter ကိုအိတ်သမုတ်သောအိတ်အမျိုးအစားမြေမှုန့်စုဆောင်း၏နှလုံးဟုခေါ်တွင်စေနိုင်ပါတယ်။...
polyester နှင့်အတူအထည်အိတ် Dedusting ဝမ်းနည်း needled
tag ကို: polypropylene အပ် Dedusting Bag ခံစားခဲ့လက်သီးဖြင့်ထိုးနှက် , ရေတွန်းလှန်နှင့် Dedusting Bag , နှစ်ဦးကဆန့်ကျင်ဖုန် Bag
လျှောက်လွှာနယ်ပယ်: ဒါဟာ 240 စင်တီဂရိတ်မြင့်မားတဲ့အပူချိန်မှာအချိန်ကြာမြင့်စွာသုံးနိုင်တယ်။ ရေတိုအချိန်အပူချိန်ခုခံဒါဟာကျယ်ပြန့်သံမဏိ, ဘိလပ်မြေ, လျှပ်စစ်ပါဝါ, nonferrous သတ္တု, စွန့်ပစ်မီးရှို့ဖျက်ဆီး, ကတ္တရာကွန်ကရစ်ရောစပ်,...
မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် dedusting အိတ်
tag ကို: ဘုံ Dedusting Bag , မြင့်မားသောအပူချိန်ဖုန်မှုန့်အိတ် , ဖုန်မှုန့်အိတ်၏ဈေးနှုန်း
ကုန်ပစ္စည်း features တွေ: လက်သီးဖြင့်ထိုးနှက် Glass ကိုဖိုင်ဘာအပ်အထည်အိတ်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်မှုနှင့်အတူ filter ကိုပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ခံစားရတယ်။ အဆိုပါ filter...
မြင့်မားတဲ့အပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် dedusting အိတ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
tag ကို: တူညီသည့်အဖုန်အိတ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု , အမြင့်အပူချိန် Dedusting အိတ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု , အနိမ့်အပူချိန်ဖုန် Filter ကို Bag
အရည်အသွေးမြင့်မား antistatic polyester dedusting အိတ်ခံစားခဲ့ရ
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD3/ Piece/Pieces
tag ကို: Antistatic polyester Dedusting Bag ခံစားခဲ့ , High Quality ဖုန် Bag , High Quality Antistatic ဖုန် Bag စုဆောင်းခြင်း
လက်ရာမြောက်သောလက်ရာကျနော်တို့အမြဲပိုကောင်းဘို့ကြိုးစားကြသည်။ ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေး filter ကိုအိတ်စက်မှုဇုန်မြေမှုန့်ကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်ပေါ်စေရာ, ဘိလပ်မြေစက်ရုံများ,...
မှုန်ရေမွှားပန်းချီစက်ရုံအတွက် Dedusting သနျ့ရှငျးစသောသူ
tag ကို: ခရမ်းလွန် Optical အောက်ဆီဂျင် Catalyst , ခရမ်းလွန် Deodorizing စင်ကြယ်စေ , အငွေ့စင်ကြယ်စေခြင်းဖယ်ရှားရေး
အဓိပ္ပာယ် စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုကနေစွန့်ပစ်ဓာတ်ငွေ့မကြာခဏပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူ့ကျန်းမာရေးအပေါ်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများရှိသည်။ သန့်ရှင်းရေးအစီအမံများအိပ်ဇောထုတ်လွှတ်စံချိန်စံညွှန်းများ၏လိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းဖို့လေထုမဝင်ခင်ခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်။...
အိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းဘို့လူပျိုသွေးခုန်နှုန်း dedusting device ကို
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 3500 / Set/Sets
tag ကို: လူပျို Pulse Bag Filter ကို , လူပျို Pulse Dedusting စက်ပစ္စည်း , သွေးခုန်နှုန်းအိတ်ဖုန်ဖယ်ရှားရေးစက်ပစ္စည်း
Heng Rui သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး - တရုတ်ထုတ်လုပ်သူအမျိုးမျိုးသောစက်မှုဇုန်မြေမှုန့် remover ပစ္စည်းကိရိယာများ, သွေးခုန်နှုန်းအိတ် filter ကို, ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖုန်မှုန့် remover, desulfurization နှင့်ဖုန်မှုန့် remover,...
မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသွေးခုန်နှုန်း dedusting ကိရိယာများ
tag ကို: မြင့်မားသောစွမ်းရည် Dedust ပစ္စည်း , မြင့်မားသောစွမ်းရည် Pulse Dedusting စက်ပစ္စည်း , မြင့်မားသောစွမ်းရည် Pulse ဖုန်ကောက်ခံရေး
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ ဖော်ပြချက်: System ကိုစုဆောင်း Baghouse ဖုန်အငွေ့ /...
rotary ပူးတွဲ၏အရိုးစု Dedusting အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အထူးပုံဖုန်မှုန့်စုဆောင်း၏အရိုးစု Dedusting အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Trapezoid Dedusting ကေ့အရိုး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
multi ပူးတွဲသံမဏိကေ့အရိုး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
multi ပူးတွဲမှုန်ရေမွှားပလပ်စတစ် dedusting အိတ်လှောင်အိမ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အီလက်ထရောနစ်ထိန်းချုပ်မှု 24V dedusting သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဓာတ်အားပေးစက်ရုံအတွက် Dedusting အိတ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသောဆီလီကွန်အောက်စီဂျင် dedusting အိတ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
polyester ဖိုင်ဘာ antistatic အပ်ဝမ်းနည်း၏ Dedusting အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
polyester နှင့်အတူအထည်အိတ် Dedusting ဝမ်းနည်း needled အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် dedusting အိတ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားတဲ့အပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် dedusting အိတ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အရည်အသွေးမြင့်မား antistatic polyester dedusting အိတ်ခံစားခဲ့ရ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မှုန်ရေမွှားပန်းချီစက်ရုံအတွက် Dedusting သနျ့ရှငျးစသောသူ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းဘို့လူပျိုသွေးခုန်နှုန်း dedusting device ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသွေးခုန်နှုန်း dedusting ကိရိယာများ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wholesale ကေ့အရိုး Dedusting from China, Need to find cheap ကေ့အရိုး Dedusting as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on ကေ့အရိုး Dedusting produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our ကေ့အရိုး Dedusting, We'll reply you in fastest.